Home Wararka Gudaha Go’aanka Joe Biden: Waa imisa tirada Ciidamada Mareykanka ee uu Biden usoo...
Go’aanka Joe Biden: Waa imisa tirada Ciidamada Mareykanka ee uu Biden usoo dirayo Soomaaliya?
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa ansixiyay in ciidanka Mareykanka dib loo geeyo Soomaaliya, inkastoo tiradu ay tahay mid ka yar tii horay u joogtay Soomaaliya.
Amarka uu bixiyay Biden ayaa dhigaya in wax ka yar 500 oo askari oo Mareykan ah la geeyo gudaha Soomaaliya, sida ay Isniintii sheegeen saraakiil ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee xukuumadda Washington.
Sanad ka hor, madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in ciidamadooda laga saaro gudaha Soomaaliya.
Ka hor inta uusan Trump amar ku bixinin in ciidamadiisa ay ka wada baxaan Soomaaliya, tirada militeriga Mareykanka ee ka howl gali jirtay waddanka ku yaalla geeska Afrika waxay ahaayeen ilaa 700 oo askari.
Diyaaradaha Maraykanka oo ka soo duulay markabka USS Makin Island oo xilligaas soo gaaray xeebaha Soomaaliya ayaa bishii December ee sanadkii 2020 kii ka daabulay xerada Balli-Doogle saraakiil, ciidamo iyo qayb ka mid ah qlabkii ciidamamada.
Sidoo kale isla horraantii sanadkaas ciidamo kale ayaa laga qaaday magaalada Boosaaso, halkaas oo ay ku tababari jireen ciidamada Puntland ee PSF ta.
Isniintii la soo dhaafay, waxaa magaalada Muqdisho kulan ku dhexmaray safiirka Maraykanka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud.
Kulankaas kadib war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Maraykanka ayaa lagu sheegay in mudane Biden uu saxiixay boqolaal ka mid ah ciidamada Maraykanka oo loo daabuli doono Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka noqon doona dagaalka lagula jiro Al-shabaab.
Ciidankaan markii ay joogeen wadanka, shaqadoodu waxay ahayd in ay tababar siiyaan ciidamada Soomaalida ah ee taga furimaha, sida kumaandooska Danab ee jooga xerada Balli-Doogle iyo ciidamada PSF ta ee saldhigoodu yahay Puntland.
Waxa kale oo ay fulin jireen walina fuliyaan, weeraro cirka ah oo ay u adeegsadaan diyaaradaha drone ka ah, kuwaas oo ay ku bartilmaameedsaan madaxda al-Shabaab. Duqaymahaas waxay marar badan ku dhacaan dad rayid ah oo guryahooda iyo baarehooda dhexjooga.
Haddaba dad badan oo shacabka Soomaaliyeed ka mid ah ayaa is weydiinaya, ciidamadaan muddo ka badan toban sano ayay dagaal kula jireen al-Shabaab ilaa iyo haddana amniga soomaaliya wax iskama badalin ee xagee wax iska qaban la’yihiin?.
Samira Gaid waxay ka faalootaa arimaha ammaankam Soomaaliya, iyada oo ahayd madaxii tubta amniga ee xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxay aaminsantahay in nabadgalyada Soomaaliya ay ku xiran ciidamada Soomaalida.
Samira ayaa tiri: “Guusha la rabo in Shabaab laga guuleysto kama imaandoonto ciidan Maraykan ama ciidanka shisheeye ee hadda noo jooga. Waxay ka imaandoontaa ciidan Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo mideysan.
Ciidamada dagaalama ee Al-shabaab ee sida dhaw xulufada ula ah al-Qaacida waxaa lagu qiyaasaa in yihiin 10,000 oo askari.
Inkasta oo la-Shabaab ka dagalaaman gudaha Soomaaliya, hadana waxaa qorshahooda ka mid ah in maamulkoodu gaaro caalamka oo dhan oo uu ka mid yahay Maraykanku.
Laba sano ka hor al-Shabaab waxay weerareen xero ciidmaada cirka Maraykanka ku leeyihiin Kenya, halkaas oo ay ku dileen ciidamado Maraykanka ah, sidoo kalana ku gubeen diyaarado iyo qalab milatari.
Dhanka kale Qorshaha uu saxiixay madaxweyne Biden waxaa ka mid ah in la beegsan doono dhawr iyo toban ka mid ah hugaamiyaasha ugu sarsarreeya ee Al-shabaab.
Hadaba hawlagalladan intee in la’eg ayay yihiin danta soomaalida in kabadn inta ay yihiin danta Maraykanka.
Previous articleSheekh Zakir iyo Sheekh Gumi: Maxay diintu ka qabtaa dilka qofka Nabiga aflagaaddeeya?
Next articleDaahirnimada eyga iyo doofaarka: Fatwo uu soo saaray sheekh caan ah oo muran ka dhexdhalisay Masar
RASMI: Xiddiga Ku Guulaystay Kabta Dahabka Ah Ee Gool Dhalinta Premier...